Iran: Fanentanana Ataon’ny Bilaogera Hiarovana Ny Faritra Mando · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 30 Jona 2017 7:48 GMT
Iray amin'ireo faritra mando lehibe indrindra i Anzali, avaratr'i Iran ary nahasarika bilaogera maro. Afaka mahita natiora milamina avy amin'i Kossof, bilaogeran-tsary malaza isika.
Mohsen Tizhoosh, bilaogera maitso sady mpikatroka nilaza [Fa] fa tokony hanao fanentanana maitso ao amin'ny aterineto isika isaky ny vanin-taona ary hampiroborobo lohahevitra momba ny tontolo iainana eo amin'ireo bilaogera. Namoaka sary hafa ihany koa izy mba hampatsiahy antsika momba ny fiainan'ny biby ao amin'ity faritra ity:
Jamshidi, bilaogera sady mpanao gazety kosa nilaza fa ny Japoney no mikolokolo fatratra ny faritra mando Iraniana noho ny governemanta Iraniana. Nanoratra [Fa] izy fa: